Mogadishu Journal » Ila QOSAL
Geel farabadan oo Careysan oo soomaali ah ayaa kasoo tilaabey xaduuda u ay Soomaaliya lawadaagto Kenya. Geelii waxa ay mudaharaad kasameyeeyeen Safaarada mareykanku uu ku leeyahay Kenya iyaga oo kudhawaaqaya halkudhigyo ay kamid yihiin uma dulqaadan karno dhibaatada mana u adkeysan karno intaan kabadan. Iyo Iwm. Hadaba wariye katirsan shabaakada iiRoon.comoo lagu magacaabo Dabacadeeye ayaa qadka taleefoonka kula xiriiray afhayeenka Geela Careysan Hal lagu magacaabo Dhudo waxa uuna ugu horeynba weydiiyey sababta kaliftey in ay safaarada Mareykanka ku mudaharaadaan.?
Dhudo waxa ay kujawaabtay Waxbadan baanu dulqaadanay oo duurjoog ahaanay wax na daryeelana aanu weyney marka waxa ay dantu nagu qasabtay kuwii nadhaqanjirey kuwa naga wadey inaanu daalac u qabsano.
Dabacadeeye Waxa kale oo uu Dudo weydiiyey in ay wax ka ogtahay in mareykanku howlihii rispoonsalada uu hakiyey isla markaasna sharciyo kusoo rogey kuwaas oo ah in dhiig laga qaado dadkii laqaadayo marka maadaama aad Geel tihiin dhiigna laiska qaadayo side bey kusuurtoobeysaa in kuwii idin dhaqanjirey laidinka daba geeyo.?
Dhudo waxey ku jawaabtey: waxkasta waanu lasoconaa waana ognahay in mareykanku dadka dhiig kaqaado mana ka cabsi qabno in anagan dhiig nalaka qaado waayo kuwa caanaheena cabay iyo anagu isku dhiigbaanu nahay.
Oo yaa u sheegay inaanu macalimiin nahay waar inaga keen meesha
Beri baa laba wiil oo reer waqooyi ah macalin nimo loogu diray koonfurta Soomaaliya Markaasbaa hooyooyinkood ladardaarmeen oo ku yiraahdeen. Reer koonfureedka iska ilaalsha waxna hakudarsanina way Falfal badan yihiine (Falfalku waa sixirka )
Wiilashii waxa ay yimaadeen Muqdisho waxa ayna bilaabeen shaqadoodii macalinimo cidkale oo aan ayaga eheyn oo ay wax lawadaagaan majirto
Ileen dardaarankii hooyadood ayaa qalbiga uga taagane waxa ayna aamin san yihiin in reer koonfureedka oo dhan ay sixiroolayaal yihiin.
Maalin jimco ah ayey waxa ay yimaadeen meel maqaayad ah si ay uga shaahiyeeyaan.
Markaasbey meel gees ah oo xoogaa dadka kafog fariisteen.
Iyaga oo iska shaahiyeynaya sigaarna cabaya ayaa wiil ciyaal xamar ah oo deb uu shigaar kashito raadinaya u yimid.
Markaasbuu kuyiri Macalimiinta yaaqey debka igu qabo.
Labadii wiil ee reer waqooyi intay isfiiriyeen ayuu midi soo boodey oo kiikale kuyiri waar Jaamac inaga mari meesha wataa wixii islaantu sheegeysee. Oo yaa u sheegay inaanu macalin nahay.
Isagoo u maleeya macalimiinta uu wiil ku ugu yeeray inuu yahay mid Sixirku tusay